पार्टी भनेको एउटा विचार, संगठन, राजनीति र कार्यक्रम हो - अध्यक्ष क. प्रचण्ड - Left Review Online
आज : २०७७ जेठ २३ गते शुक्रवार
पार्टी भनेको एउटा विचार, संगठन, राजनीति र कार्यक्रम हो – अध्यक्ष क. प्रचण्ड
अध्यक्ष प्रचण्डका विचारहरू
यदि मार्क्सवादको चुरो कुरो लेनिन बारबार जोड दिएको कुरा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने कुरा नै मार्क्सवादको जीवित आत्मा हो । मार्क्सवाद धर्मशास्त्र होइन । यसलाई पढेर मात्र हुने कुरा होइन ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइन २०७६ फागुन १८ गते आइतवार
हामीले पार्टी एकताको संकल्प गर्दै गर्दौ, हामीले निर्वाचनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने संकेत गर्दै गर्दा, जुन उत्साह, उमंग र विश्वास आम कार्यकर्ता र जनतामा थियो । हामीले त्यही जनताको विश्वास र हामीले जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पार्टी एकता पूरा गरेका छौँ । हामीले ऐतिहासिक दिन पारेर कमरेड मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित स्मृति दिवसको दिन पारेर ऐतिहासिक पार्टी एकता गर्‍यौँ । र, हामीले जनता, राष्ट्रप्रति र हाम्रो विचार, संकल्प र प्रतिबद्धताप्रति इमान्दार छौं भन्ने ऐतिहासिक रुपमै प्रमाणित गर्‍यौँ । यसले आम जनता, कार्यकर्ता र हामीमा पनि उमंग पैदा गरको थियो । हामीले उत्सव जस्तो गरी दुई घण्टामा पार्टी एकता सकेका थियौं ।
पुराना सबै पार्टी र कमिटी विघटन गरेर नयाँ पार्टी बनायौँ । पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक पनि उत्सव जस्तै नै भयो । हामी त्यतिबेला तीन महिनामै सबै कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरेका थियौँ । त्यो उत्सवको माहौलमा भनिएको थियो, अस्वभाविक थिएन । अहिले दुई वर्ष भयो, हामीले मूलभूत रुपमा सकियो भनेका छौँ । मूलभूत रुपमा रुपमा पार्टी एकता टुंगिएको छ ।
हामीले ३ महिनामा स्थायी समितिको बैठक बस्ने भनेका थियौँ, त्यो एक वर्षको अवधिमा बसिएको छ । केन्द्रीय समितिको व्यवस्थित वैठक पनि ६ महिनामा भनिए पनि बीस महिनापछि बसियो । तर त्यो निकै व्यवस्थित भयो । हामीले जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त र विधिको भरपुर अभ्यास गरेर केन्द्रीय समितिको बैठक सिध्याएका छौँ । केन्द्रीय समितिमा हामीले व्यवस्थित रुपमा छलफल गर्‍यौँ । हामीले भनेकै समयमा सबै छलफल सक्यौँ । कसैले मैले यो कुरा भन्न पाइन, मलाई समय पुगेन भन्ने स्थिति कतै बाँकी रहेन । केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहयात्री कोही पनि साथीहरुको अनुहारमा गाँठो पर्न दिइएन । सबै उज्यालो अनुहार दिएर, अब ढिलै भएपनि पार्टी बन्ने भयो भनेर विश्वास जगाएर र कयौं अफ्ट्याराहरुको बिचमा पनि, कयौं संवेदनशील मुद्दाहरुमा पनि एकरुप समझदारी बनाएर बैठक सम्पन्न भयो ।
मैले किन यो भनेको भने, तपाईंहरु पनि प्रदेश कमिटीको बैठक बस्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरुले एजेण्डा निश्चित गर्ने कुरा, बैठकलाई अनावश्यक लम्ब्याएर कचिंगल पैदा गर्ने खालको हुन नदिने कुरा, समयमै बैठक बस्ने कुरा, कुनै पनि सदस्यले आफ्नो विषय राख्न पाइन भन्ने वातावरण हुन नदिने कुरा र उचित समयमा उचित निष्कर्ष र निर्णय दिने कुरा, यो विधिमा तपाईहरु सबैको ध्यान जाओस । हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय समितिको पूर्ण वैठक एकताको संक्रमणकालबाट गुज्रिँदै गरेको पार्टीका निम्ति, हाबी सबैका निम्ति एउटा शिक्षा हुन गयो । यसलाई सबै कमरेडहरुले एउटा स्कुलको रुपमा बुझ्न र आत्मसाथ गर्न अपील गर्दछु ।
हामी केन्द्रीय समितिकै बैठकको स्प्रिटमा चार प्रदेशको भेला र प्रशिक्षण सकिएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकलाई एउटा रिफ्रेसको रुपमा लिन र केन्द्रीय समितिका बैठकले पारित गरेका प्रतिवेदनहरु सबैले आत्मसाथ गर्न अपील गर्छु ।
पार्टी भनेको के हो ?
पार्टी भनेको के हो भन्नेबारे यो कम्युनिस्ट पार्टी रहेसम्म बहस चलिरहन्छ । मूलभूत रुपमा पार्टी भनेको एउटा विचार, संगठन, राजनीति र कार्यक्रम हो । अर्को पार्टी भनेको विधि पद्धति हो । विचार र विधिको संश्लेषण नै पार्टी हो । विचार र विधिको एकरुपता नै पार्टी हो । पार्टी के हो भन्ने बारे चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ (सी चिनफिङ) सँग पनि नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको बेला छलफल गर्ने अवसर मिल्यो । उहाँहरुले “हामी मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका सिद्धान्तहरुमा प्रतिबद्ध छौँ, चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी कार्यक्रममा हामी दृढ छौँ । समाजवाद स्थापनाको दिशामा हामी प्रष्ट छौँ । अर्को हामी विधि र पद्धतिमा प्रष्ट छौँ । विधि, पद्धति र विचारमा प्रष्ट भएका कारण हामी नौ करोड पार्टी सदस्यलाई पनि राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ । र, एक अरबभन्दा बढी मानिसलाई हामीले नेतृत्व दिन सकेका छौँ” भन्नुभयो ।
अहिले हाम्रो पार्टीको सन्दभमा पनि यो विषय यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसकारण हामी पहिला विचार, राजनीति र कार्यक्रमा प्रष्ट हुनुपर्‍यो । दोस्रो हामी विधि र पद्धतिमा प्रष्ट हुनुपर्यो । निजी विषयमा प्रष्ट हुने कोशिस गर्नुपर्यो । र यो पलन गर्ने कुरा हामी स्ष्ट हुनुपर्यो । यति भयो भने हामी करोडौँ पार्टी सदस्यलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने विस्वास हुनुपर्छ । यदि विचारलाई आवश्यक महत्त्व दिएर, त्यसलाई विशिष्टता हासिल गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेनौँ, त्यसलाई समय परिस्थिति, विश्वमा आएको बदलाव, विज्ञान-प्रविधिमा आएको नयाँ नयाँ आविष्कार र विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा आएका परिवर्तन लगायतका थुप्रै कुराहरुसहित हामीले हाम्रा विचारलाई गतिशील रुपमा विकास गर्न सकेनौँ, परिमार्ज गर्ने प्रकृतिभित्र हामीले आफूलाई बाँध्न सकेनौँ भने हामी दिशाहीन हुने खतरा हुन्छ । यदि हामीले त्यसो गर्न सक्यौँ भने विचारलाई निरन्तर गति दिन र परिस्थिति अनुरुप अगाडि बढ्न सक्छौँ । यदि मार्क्सवादको चुरो कुरो लेनिन बारबार जोड दिएको कुरा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने कुरा नै मार्क्सवादको जीवित आत्मा हो । मार्क्सवाद धर्मशास्त्र होइन । यसलाई पढेर मात्र हुने कुरा होइन ।
(अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाको बागमती प्रदेशको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश ।)
पछिल्लाे - नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकको दिशानिर्देश
अघिल्लाे - समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहकारी
त्यो जात जसले मलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो
जातिवादी श्रेष्ठता के दम्भ में अन्याय और अत्याचार की सभी सीमाएँ नाँघ जाते है, और इसके...
मार्क्सवाद र उत्तराधुनिकतावाद बारे केही कुरा
पेम्पा तामाङ सरको 'मार्क्सवाद र उत्तराधुनिकतावाद' पढेपछि अनुभूतिमा उब्जेका मन्तव्य एवं केही विचारलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । पहिलो, उत्तराधुनिकताले पुँजीवादको समर्थन...
को हुन् क्रिस हनी ? क्रिस हनी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक महान् क्रान्तिकारी र अन्तर्राष्ट्रयवादी नेता हुन् । अफ्रिकी समाजवादी र मुक्तिकामीहरुका...
जातिवादी श्रेष्ठता के दम्भ में अन्याय और अत्याचार की सभी सीमाएँ नाँघ जाते है, और इसके विरोध में दलित समुदाय जब आवाज...